Khasaaraha ka dhashay qarixii Shangaani oo kordhay iyo Filish oo war soo saaray - Caasimada Online
Home Warar Khasaaraha ka dhashay qarixii Shangaani oo kordhay iyo Filish oo war soo...
Khasaaraha ka dhashay qarixii Shangaani oo kordhay iyo Filish oo war soo saaray
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa weli sii soo taraya khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qarixii is-miidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay xaafadda saddexda Geed ee degmada Shangaani, kaas oo geystay waxyeelo isugu jirto dhimasho iyo dhaawac.
Dhimashada ayaa gaartay ugu yaraan illaa 6 qof oo uu ku jiro is-miidaamiyihii fuliyey weerarka, waxaana sidoo kale dadka ku dhintay qaraxan ay u badnaayeen dhalinyaro ku shaaxeysay maqaaxi ku taalla agagaarka saldhigga degmada Shangaani ee G/Banaadir.
Meydadka dhalinyaradaasi ayaa sidoo kale lagu wadaa in maanta lagu aaso qabuuraha Muqdisho, iyada oo ay qeyb-galayaan ehellada marxuuminta iyo dadweyne kale.
Dhinaca kale guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir, Cumar Maxamuud Maxamed (Filish) ayaa war kasoo saaray qaraxaasi, wuxuuna marka hore tacsi u diray ehellada ay dadkooda ku dhinteen qaraxaasi, isaga oo kuwa dhaawaca ahna u rajeeyey caafimaad .
Sidoo kale wuxuu ugu baaqay Ummadda Soomaaliyeed in loo midoobo dagaalka adag ee lagula jiro kooxda Al-Shabaab.
Si kastaba muddooyinkii dambe ayaa waxaa sii xoogeysanayey falalka ammaan dari ee ka dhacaya gudaha caasimada, kuwaas oo isugu jiro qaraxyo iyo sidoo kale dilal qorsheysan.